Compressors နှင့် decompressor ။ သူတို့ကဘာတွေလဲ၊ Gadget သတင်း
Compressors - decompressor ။ သူတို့ဘာတွေလဲ၊ သူတို့အတွက်ဘာတွေလဲ၊ ဘယ် compressor ကိုရွေးချယ်မလဲ
အတွေ့အကြုံရှိသောအသုံးပြုသူများသည် compressor ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း၊ ၎င်းသည်ဘာလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိပေလိမ့်မည်။ သို့သော်ကွန်ပျူတာဖြင့်စတင်သောလူအများသည်သူစိမ်းများဖြစ်သည် unzip၊ compressed ဖိုင်၊ decompressor (သို့) compressor စသည့်ဝေါဟာရများ.
ဒီနေ့မှာတော့ Compressor ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာအတွက်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့သေးသေးလေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်နှင့်မည်ကဲ့သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုမည်သည့်တွန်းအားကိုရွေးချယ်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဆက်မလုပ်မီကaကိုရည်ညွှန်းသည့်အခါယခု မှစ၍ ရှင်းလင်းရန်လိုသည် တွန်း ငါ compress နှင့် decompress နှစ် ဦး စလုံးခွင့်ပြုတဲ့ program ကိုရည်ညွှန်းပါလိမ့်မည်ယနေ့ခေတ် compress အားလုံးပရိုဂရမ် decompress ၏ဆန့်ကျင်ဘက်စစ်ဆင်ရေးလုပ်ပေး။
1 file compressor ဆိုတာဘာလဲ။
2 file compressor ဆိုတာဘာလဲ။
file compressor ဆိုတာဘာလဲ။
Un ဖိုင် compressor ဖိုင်တစ်ခု၏အရွယ်အစားကိုလျှော့ချရန် (ချုံ့ရန်) ခွင့်ပြုသည့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ (ဥပမာ, PDF ဖိုင်အရွယ်အစားကိုလျှော့ချပါ) ဒီဟာစီးရီးမှတဆင့်အောင်မြင်ခဲ့သည် algorithms ဖိုင်တစ်ဖိုင်တွင်ပါရှိသောဒေတာများသည်သတင်းအချက်အလက်ဆုံးရှုံးခြင်းမရှိပဲအရွယ်အစားနည်းသွားနိုင်သည်။ ငါ compressor ဖိုင်တစ်ခု၏အလေးချိန်ကိုမည်သို့လျှော့ချနိုင်ကြောင်းကိုသွားမည်မဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာဤဆောင်းပါး၏ပြင်ပတွင်ရှုပ်ထွေးသောအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ကွန်ပျူတာကိုစတင်သူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ သို့သော်စိတ်ဝင်စားသူများသည်ပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်သည် အပေါ်ရှာဖွေသည် ဒေတာချုံ့.
Bကောင်းပြီ၊ ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ကျွန်တော်ဟာ file compressor အကြောင်းပြောတဲ့အခါ compressed files တွေကို decompress လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်။ ယခင်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်စပ်လျဉ်း။ compressor သည် compressed file ကိုမူလ format (decompressing) သို့ပြန်ထားနိုင်ကြောင်းထပ်ထည့်ရမည်။ သင်တွေးမိလိမ့်မည် အဘယ်ကြောင့်ဖိုင်ကိုချုံ့ခြင်းနှင့်ထို့ကြောင့်တစ်ချိန်လုံးနေရာနည်းနည်းယူမလဲ?။ ပြproblemနာကဖိုင်တစ်ခုကို compress လုပ်သောအခါ၎င်းသည်၎င်း၏ပုံစံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် compressors မှသာကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင့်တွင်စာရွက်စာတမ်းရှိလျှင် PDF extension ကို program ကိုဖွင့်လို့ရတယ် Foxit PDF ကို Reader ကို ဖိုင်တွဲကို compressor ဖြင့်ချုံ့ပြီးသင် unzip မလုပ်မချင်းစာရွက်စာတမ်းကိုဖွင့ ်၍ မရပါ။
Eဘာလို့လဲဆိုတော့သင် file တစ်ခုချုံ့လိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ extension ကပြောင်းလဲသွားလို့ပါ။ ကျွန်တော်ရှင်းပြပါရစေ။ ဥပမာအားဖြင့် "my_program.exe" လို့ခေါ်တဲ့ဖိုင်ထဲမှာ extension က "။exe»၎င်းကိုသင်ချုံ့သောအခါ« my_program.zip»ဒါမှမဟုတ်« my_program.rar»သင်ရွေးချယ်သောချုံ့မှုပုံစံပေါ်မူတည်သည်။ အသုံးအများဆုံး compression အမျိုးအစားများမှာဤ (zip နှင့် rar) နှစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအခြားများစွာသော 7-ZIP, A, ACE, ARC, ARJ, B64, BH, BIN, BZ2, BZA, C2D, CAB, CDI, CPI, DEB, ENC၊ GCA, GZ, GZA, HA, IMG, ISO, JAR, LHA, LIB, LZH, MDF, MBF, MIM, NRG, PAK, PDI, PK3, RPM, TAR, TAZ, TBZ, TGZ, TZ, UUE, စစ်၊ XXE၊ YZ1၊ Z နှင့်တိရစ္ဆာန်ရုံ။
compressors အများစုကသင့်ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည် ဤအပုံစံများမဆိုကိုင်တွယ် အကယ်၍ သင်၏ operating system သည် Linux ဖြစ်ပါကဤလမ်းညွှန်တွင်သင့်ကိုမည်သို့ပြမည်နည်း tar.gz ထည့်သွင်းပါ.
ကျွန်ုပ်တို့ compressed file ရှိသည့်အချိန်၌ hard disk ပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသောနေရာအပြင်ကွန်ပျူတာ compressor မှ files တစ်ခုသို့ files များပေးပို့သောအခါ file compressor ၏အခြေခံအသုံးဝင်မှုကိုတန်ဖိုးထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဖိုင်တဖိုင်ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ပေးပို့ခဲ့လျှင်၎င်း၊ ပရိုဂရမ်ကပေးပို့ရန်ဖိုင်သည်အလွန်ကြီးသည်ဟုပြောလျှင်၎င်းသည်သင်သိရှိရသည့်အတွက် ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်။ compressor ဖြင့်ဖိုင်အရွယ်အစားကိုလျှော့ချနိုင်သည် မေးလ်ဖြင့်ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကွန်ယက်မှဖိုင်များဝေမျှခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်၊ သူတို့၏အရွယ်အစားကြီးလေလေ၊ ပို့ရန်သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကြာကြာကြာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဖိုင်တွေကိုချုံ့ခြင်းအားဖြင့်ဖိုင်တွေကိုပေးပို့ဖို့နဲ့သိမ်းဆည်းဖို့နေရာအပြင်သိုလှောင်နေရာလည်းရလိမ့်မယ်။
Bကောင်းပြီ၊ file compressor သည်မည်သည့်အရာနှင့်ဘာအတွက်လဲဆိုတာငါတို့သိပြီးသားဖြစ်သည်။ ယခုမည်သည့်အရာကိုရွေးရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ မှတစ်ခုဖြစ်သော compressors - အသုံးအများဆုံး decompressor အဆိုပါဖြစ်ပါသည် WinZipငွေပေးချေမှုအများဆုံးအကျယ်ပြန့်ဆုံးနှင့်အသုံးပြုသောအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်သည် Winrar, ဒါပေမယ့်လည်းပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အခမဲ့ file compressors ကျွန်တော်တို့ကိုပိုမိုပေးပို။ ပို။ လူသိများဖြစ်လာသည်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးဆောင်တ ဦး တည်းနှင့်အတူပြုသကဲ့သို့တူညီသောအရာတို့ကိုပြုခွင့်ပြုပေမယ့်ပေမယ့် အခမဲ့။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ပုံမှန်အသုံးပြုသူအသုံးပြုသောလုပ်ဆောင်ချက်များသည် zip နှင့် unzip သာဖြစ်သည်။ ဤအခမဲ့ပရိုဂရမ်များသည်၎င်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမည်သည့်အရာထက်မဆိုပိုမိုလုပ်ဆောင်သည်။ အခမဲ့အပြင်၌ရှိကြ၏လျှင် español အရာတစ် ဦး တွန်းရန်အသုံးပြုရန်တစ်ပြားမှပေးဆောင်ဖို့မရွေးချယ်ပါတယ်။ ငါနှစ် ဦး စလုံးကြည့်ရှုရန်အကြံပြုပါသည် 7-Zip ကဲ့သို့ Z ဇရတ်သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ ၄ င်းတို့သည်စပိန်ဘာသာဖြင့်ရှိသည်။ သင်သည်၎င်းတို့နှင့်အလွယ်တကူချုံ့နိုင်၊
Sငါစိတ်ဝင်စားတယ် အခမဲ့ပြီးအလွန်ပြီးပြည့်စုံသော compressor ကို install လုပ်ပါဒီကိုဖတ်ပါ IZArc ထည့်သွင်းမှုလက်စွဲပရိုဂရမ်ကိုတစ်ဆင့်ချင်းမည်သို့ install ရမည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ မကြာခင်မှာနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာပရိုဂရမ်ရဲ့အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး compressor-decompressor ကဘာလဲ၊ ဆောင်းပါးကခင်ဗျားအတွက်အသုံးဝင်မယ့်အရာလို့ခင်ဗျားရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ထားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ Vinegary အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » Compressors - decompressor ။ သူတို့ဘာတွေလဲ၊ သူတို့အတွက်ဘာတွေလဲ၊ ဘယ် compressor ကိုရွေးချယ်မလဲ
82 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ၀ ယ်ယူခြင်း၏တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ဖိအားများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်လိုအပ်သောကြောင့်ဤတွင်ဖြတ်သန်းနေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအချက်အလက်သည်ကျွန်ုပ်အားတကယ်ကူညီသည်ဟုဆိုရမည်။
အခုငါ့အလုပ်၏စာတမ်းဖတ်ပွဲတွင်ဤစာမျက်နှာကိုငါသွားမည်။ ကျွန်ုပ်၏ဆရာသည်စာဖတ်ရန်အတွက်ဤနေရာတွင်ရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်ဟုသေချာသည်။ )
မင်္ဂလာပါ၊ ကွန်ပြူတာတွေပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့အချက်အလက်တွေကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်၊ ငါရှာနေတာပဲ၊ အင်တာနက်ကိုတခြားသူတွေကိုကူညီဖို့သူတို့ကိုအန္တရာယ်ပြုဖို့သာမကလူတွေကိုအသုံးပြုတာကောင်းတယ်။
ကောင်းပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ချစ်သူ ဘလော့ဂ်ကိုအလုပ်တစ်ခုအတွက်ရည်ညွှန်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အိုင်တီဆိုင်ရာမေးခွန်းနည်းနည်းနဲ့လူတွေကိုကူညီနိုင်တာက ၀ မ်းသာစရာပါပဲ။ မင်္ဂလာပါ။
Vinagre Asesino သည်သင်၏စာမျက်နှာကိုအလွန်ကောင်းအောင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသောကွန်ပျူတာအလုပ်အတွက်လုပ်ရန်မှာထားသည့်အတိုင်းအချက်အလက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Rocker ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါနှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ တွန်း ပြီးတော့သင်စာမျက်နှာကိုကြိုက်တယ်။ မင်္ဂလာပါ။
Luis Pedro ဟုသူကပြောသည်
ဆဲလ်ဖုန်းအခင်းအကျင်းဖြစ်သော thm ဖိုင်များကိုယနေ့ကျွန်ုပ်မည်သို့ချုံ့နိုင်မည်နည်း
Luis Pedro အားပြန်ပြောပါ
Luis Pedro ဒီကိုဖတ်ပါ THM ဖိုင်များအပေါ်လက်စွဲစာအုပ်.
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် hard disk တွင်သူတို့နေရာပိုယူတိုင်းအချိန်ကတည်းကကျွန်ုပ်တွန်းရန်လိုသောသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေနေသည်။ ငါ compressors အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။
weno ပထမ ဦး ဆုံး kiero
ဖိုင်များကို unzip လုပ်ပါ
ဒေတာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်များစွာသောငါလက်ရှိတည်ရှိ compressors အားလုံး edit လုပ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်
Hello, အ COMRENSORS ဆောင်းပါးအလွန်ကောင်းပါတယ်
ဆက်လက်ပြီးရှိသည်!!! လူတွေကိုသင့်ကိုကြည်နူးစေဖို့အရမ်းကောင်းတယ် !! ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ
ဤသည်အလွန်ကောင်းသောဟေ့ငါကောင်းသောနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သော file ကိုတွန်းသို့မဟုတ် decompressor ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ
လူးဝစ်ဒီအခမဲ့ဖြစ်ပြီးတကယ့်ကိုကောင်းပါတယ်၊ သင်၌၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုရှင်းပြထားသောသင်ခန်းစာလည်းရှိသည် -
ဗန်နီဆာ abrego ဟုသူကပြောသည်
vanessa abrego အားပြန်ပြောပါ
ဤအချက်အလက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်သောကြောင့်ရရှိသောသံသယများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းချက်များကိုထုတ်ဝေရန်သင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဤသတင်းအချက်အလက်ကို T_T မှကျေးဇူးတင်ပါသည်
ဘာတွေလဲ ??? ချစ်တယ်
ဟားဟား .. ဒါပေမယ့်ငါမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်
Agustin Compressor တွင်ထိုလုပ်ဆောင်ချက်မရှိပါ။ သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာကသင့်ရဲ့သီချင်းတွေရဲ့ bitrate ကိုလျှော့ချပေးတဲ့ converter (compressor မဟုတ်) နဲ့လုပ်ရမယ်။
မင်းရဲ့အကူအညီ - ငါ Mac ရှိတယ်
MIGUEL ကောင်းကင်တမန် ဟုသူကပြောသည်
MIGUEL ANGEL အားစာပြန်ပါ
Federico အကောင်းဆုံး ဟုသူကပြောသည်
ငါဒီစာမျက်နှာကိုသဘောကျတယ်၊ အရာအားလုံးကိုတွေ့တယ်၊ မင်းကအကောင်းဆုံးရှလကာရည်သတ်ဆေးဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဂရုစိုက်ပါ!
နှင့်အန္တာရယ် signrrrrrrr-- မနိုင်
အကောင်းဆုံးကို Anto ဟုသူကပြောသည်
ဒီ vinagreeeeeee လူသတ်သမား
အကောင်းဆုံးကို Anto အားပြန်ပြောပါ
အရောင်နှင့်အတူ lichu (? ဟုသူကပြောသည်
aaaai သင်ရှလကာရည်မသိရ ငါကမုန့်ကိုယူလိုက်တယ်။ ငါကညင်ညင်သာသာနဲ့ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုလိမ်တယ်။ ငါနေရောင်ခြည်နဲ့ရေချိုးတာနဲ့ jijijijijij ကိုကြည့်ရအောင်လို့ပြောခဲ့တယ်
lichu ကိုအရောင်ဖြင့်တုံ့ပြန်ပါ (?
camtasia version6နဲ့ငါ့ကိုကူညီနိူင်မလားမသိဘူး။ တတ်နိုင်ရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
များစွာသော compressers ၏ nadamas k keria ဥပမာကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Jaimao ၁၉ ဟုသူကပြောသည်
Hi သင်ပြောသည့်သူကိုအသုံးမပြုပါ။ ကျွန်ုပ်သည် WINZAP နှင့်စာနယ်ဇင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုစာတိုက်တွင် တင်၍ မရပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များထပ်မံပေါ်ပေါက်လာရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်မှတ်ချက်ပေးရန်သင့်တွင်မည်သည့်မှတ်ချက်များရှိပါသလဲ။ ကျွန်ုပ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါသည်
အဆိုပါ garulla ပိုပြီး garulla ဟုသူကပြောသည်
Win Rar ကိုအခမဲ့မရရှိနိုင်လားသေချာလား။
La garulla mas garulla သို့ပြန်သွားပါ
ဟေ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါစာမျက်နှာကိုကြိုက်တယ်၊ အချက်အလက်တွေကိုငါနားလည်တယ်၊ မင်းကငါ့ကိုအနားပေးခဲ့တယ်။
မင်္ဂလာပါဟယ်၊ ဒါဟာကြက်ဥပရိုဂရမ်ကောင်းတစ်ခု၊ သူတို့ဖတ်ရမယ်
မင်္ဂလာပါကောင်းပြီ၊ မင်းကြိုက်တဲ့လူတွေ !!!!!! ဂီတဗီဒီယိုများကိုဘယ်လိုချုံ့ရမလဲဆိုတာကို disk တစ်ခုထဲသို့မည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်နည်းဟုမေးချင်သည်။
မင်္ဂလာပါကောင်းပြီ၊ မင်းကြိုက်တဲ့လူတွေ !!!!!! ဂီတဗီဒီယိုများကိုဘယ်လိုချုံ့ရမလဲဆိုတာကိုသင့်အား disk တစ်ခုထဲသို့မည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်နည်းဟုမေးချင်သည်။ နှင့်ပင်လယ်အော်နှုတ်ခွန်းဆက်သ
ရှလကာရည်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခြားသူများကိုကူညီလိုသောဆန္ဒရှိသောလူများရှိပါလိမ့်မည်။ ကျောင်းမှာပြသဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်အားလုံးကိုရှာပြီးဒီစာမျက်နှာကိုအကောင်းဆုံးကျမ်းချက်အထောက်အထားအဖြစ်ဖော်ပြတယ်။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဘုရားသခင်သည်သင့်အားဉာဏ်ပညာနှင့်ဉာဏ်ရည်ပိုမိုပေးစွမ်းနိုင်လိမ့်မည်။
jesy i lalo ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဟုသူကပြောသည်
ငါနှင့်ငါ့ရည်းစားတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အလွန်ချစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသရန်စိတ်မကောင်း။ ကျွန်ုပ်တို့အလွန်ပျော်ရွှင်ကြသည်၊ တစ်နှစ်ခွဲကြာအတူတူနေခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအတူတူဖြစ်လိုသောကြောင့်လူတိုင်းသိစေချင်ကြသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပါ။
Lalo နှင့် Jesy !!!!
jesy i lalo love မှစာပြန်ရန်
မင်္ဂလာပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကမေးပြီးပြီဆိုလျှင်လူတစ်ယောက်က thm ဖိုင်ကိုဆဲလ်ဖုန်းပေါ်တွင်တင်ရန်၎င်းဖိုင်ကိုမည်သို့ချရမည်ကိုကျွန်ုပ်သိလိုပါသလား။ Thm ဖိုင်များသည်ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်း (sony ericson) တွင်ကျွန်ုပ်ရွေးချယ်နိုင်သောနောက်ခံအရောင်များနှင့်ရုပ်ပုံများကိုပြောင်းလဲနိုင်သောအကြောင်းအရာများဖြစ်သည်။ ငါဆဲလ်ဖုန်းမှ thm ဖိုင်ကိုယူပြီးကျွန်ုပ်၏ pc သို့ယူနိုင်သည်၊ မည်သည့်ပရိုဂရမ်နှင့်မဆို decompress လုပ်နိုင်သည်၊ အရောင်များနှင့်ရုပ်ပုံများကိုပြုပြင်နိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းထဲသို့ထပ်ထည့်ရန်ကျွန်ုပ် ထပ်မံ၍ ဖိထားရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်မည်သူမဆို folder တစ်ခုကို thm file သို့မည်သို့ချုံ့မည်နည်း။
ကျွန်ုပ်၌အီးမေးလ် ၁၅ လုံး (အီးမေးလ်) ရှိ၍ ၎င်းကိုဒီဗီဒီထဲသို့ကူးယူရန်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤကဲ့သို့သောဖိုင်များအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိူင်သည့်တွန်းစက်၏ဗဟုသုတရှိပါသလား။
အဲဒီနေရာကို ဦး တည်သွားတဲ့ Kepin Kepan Bamos Jjjjjjjjj Kemando ဘီး…။
Jontxu ဖေဖေ ဟုသူကပြောသည်
Jontxu papitos အားပြန်ကြားပါ
chu pa ergagagaag ဟုသူကပြောသည်
chu pa ergagagaag အားပြန်ကြားပါ
cruz hernandez r ကို ဟုသူကပြောသည်
Garcias ကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်၊ မင်းရဲ့ဗဟုသုတနဲ့မင်းရဲ့ကြင်နာမှုအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။
cruz hernandez r ကိုပြန်လည်စာပို့ပါ
ဗီဒီယိုများကိုချုံ့ရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားနေသည်။ ဖြစ်စဉ်ပြီးဆုံးသောအခါစာအုပ်ငယ်များပေါ်လာသည်။ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ပြင်ဆင်သောအခါ၊ compressed video သည် decompressed ကဲ့သို့တူညီသည်။
Rico ဝမ်းမြောက်ခြင်း ဟုသူကပြောသည်
သင့်ရဲ့အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း၊ နားလည်ရလွယ်သောရှင်းပြချက်လိုအပ်သောသူများအတွက်တစ်စုံတစ် ဦး ကစိတ်မကောင်းဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။
joy Rico အားပြန်ပြောပါ
PROFE ကကျွန်တော့်ကို SBRE FILE COMPPRESSORS ကိုချန်ထားခဲ့ပြီးဒီစာမျက်နှာကိုငါစဉ်းစားမယ်၊
ဝီလျံ wizard ဟုသူကပြောသည်
ဟေ့ VA၊ မင်းကိုမင်းရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်မှာတကယ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်၊
ဝီလျံ Wizard ကိုတုံ့ပြန်ပါ
ဆံပင်ရွှေရောင် (: ဟုသူကပြောသည်
hahaha ya ဟုတ်ကဲ့ trankila … JAJAJJAJAJAJA blondeaaa redhead
blonde သို့ပြန်သွားရန် (:
inesite; D ဟုသူကပြောသည်
inesita အားပြန်ကြားချက်; D
Pelired; D ဟုသူကပြောသည်
Hello MR ။ Fucker XDD
Pelired သို့ပြန်သွားရန်။ D
ဟေ့၊ ငါ့ကိုအရုပ်ဆိုးလို့မခေါ်နဲ့။ ; P
rubioaa သို့ပြန်သွားရန် (:
ဒါကရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ... တစ်ခါတစ်လေမှာအေးပါတယ်။ xDD
ဆင်းရဲတဲ့ inesita !! LIMONCETE !!!!! ; D
နှင့်သင့် anxi ???
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ ဟင့်အင်း၊ xDD
နှင့်သင်၏အညစ်အကြေး? သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်း (ဘာဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုမျိုးလဲ) Den … xDD အကြောင်းပြောပြပါ
သတ္တုတွင်းကရှုပ်ထွေးပေမယ့်သင့်ရဲ့ ...... "X" ထွက်ရှာတွေ့လျှင်သင် ohahahahhaha တစ်လမ်းအတွက် shit သွားလိမ့်မယ် ... ..
ဒါပေမယ့်မင်း tranki k ငါဘာမှမပြောဘူး၊ ဒါပေမယ့်လူတွေသိတဲ့အခါငါ့ကိုအကူအညီမတောင်းပါနဲ့ ...
« K သည်မီးနှင့်လူးသည်အဆုံး၌အိုင်တီလောင်ကျွမ်းသည်»
nooo မီးဖြစ်ပါတယ် !!!!!! xDD
ငါ့ကိုပေးသည် = ¡¡¡
Pelired မှ: NOOOOO IS DEN *** LO MIO XD
လေးလံသောအရာ !!!! ငါနင့်ကိုပြောခဲ့ဖူးတယ်နင်ကြိုက်ရင် .. ပြောပါ !! xDD
Orale dude, ငါရက်ပေါင်းများစွာ compressors အပေါ်သတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေနေနှင့်အဘယ်သူအားမျှငါ့ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုမကျန်ရစ်, ဤသူသည်ငါ့ကိုကူညီလိမ့်မယ်, အစ်ကိုကောင်းတစ် ဦး ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် ... သင်တစ် ဦး ပါရမီအရမ်းရယ်ရတယ် !!!
အရသာနှင့် vir ဟုသူကပြောသည်
cata နှင့် vir သို့ပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ သင်၏စာမျက်နှာသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးပညာရေးသည်အထူးသဖြင့်၎င်းသည်အလွန်ပညာရေးဖြစ်သည်။ ငါသည်သင်အားချီးကျူးဂုဏ်ပြုပြီးသတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အချိန်တန်လျှင်မင်းရဲ့စာမျက်နှာကိုငါအမြဲတမ်းလာလည်နေမှာပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ဤစာမျက်နှာရှိသတင်းအချက်အလက်သည်ကျွန်ုပ်အားများစွာကူညီခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏တက္ကသိုလ်တွင်အိမ်စာလုပ်ရန်များစွာရှိပါသည်။ ဆရာသည် zip compressor ကိုများစွာအသုံးပြုသောကြောင့်ယခု၎င်းသည်မည်သည့်အရာနှင့်၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်၊ ၎င်းသည်မည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးအများဆုံးဖြစ်သည်။ အရေးကြီးတာကငါမှတ်စုများကို download လုပ်ပါလိမ့်မည်။ l'informacióနှုန်း Moltes Graxies ။ Adeu
ဟဲလို compressor တွေရဲ့ icon တွေကဘာလဲ
Andromeda နှင့်အတူ 'Pixel 3' လက်တော့ပ်ကို Q3 2017 အတွက် Google ကစီစဉ်ရန်စီစဉ်နေသည်
Google Allo သည် Android တွင် download တစ်သန်းကျော်ကျော်သွားပြီဖြစ်သည်